विवाह गर्ने र आमा बन्ने सहि उमेर बारे यस्तो सुझाब दिन्छन् विज्ञ
२०७७ आश्विन २१ बुधबार
- भागिरथी पण्डित
काठमाडौं - विवाह गर्ने उपयुक्त समय कुन हो यसबारे धेरै महिलाहरु जान्न चाहन्छन् । विवाह कहिले गर्ने भन्ने कुरा सामाजीक, शारीरिक र मानसिक अवस्थासँग जोडिने विराट मेटिकल कलेजमा कार्यरत स्त्रि रोग विषशज्ञ डा तरुण प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'सामाजीक आधारमा विवाह गर्ने सहि उमेर फरक फरक हुन्छन् ।'
कुनै पनि महिला विवाह गर्नु अघि गर्भधारण गर्न योग्य अर्थात श्रीमानको बंशजलाई निरन्तरता दिन सक्ने हुनुपर्छ । डा. प्रधानका अनुसार, 'महिनावारी सुरु भएपछि महिलाहरु आमा बन्न सक्छन् तर महिनावारी सुरु भएको अवस्थामा महिलाको शारीररिक बनावट आमा बन्नका लागी परिपक्व भएको हुदैँन ।' महिनावारी सुरु भए लगत्तै महिलाहरु गर्भवती हुन सक्ने भएपनि उनिहरु शारीरिक र मानसिक रुपमा गर्भधारण गर्न योग्य नहुने उनले बताए। उनका अनुसार, १५ देखि १९ बर्षमा हुने गर्भवतीलाई किशोरवस्थाको गर्भवती (टिनएज गर्भवती) भनिन्छ ।
चिकित्सकिय हिसाबले कुनै पनि महिला आमा बन्नका लागि २० बर्ष काटेको राम्रो मानिने डा. प्रधानले बताए । 'ढिला भनेर ३५ काटेपछि गर्भवती हुनुलाई पनि राम्रो मानिदैँन । कुनै महिला गर्भवती हुने एक उपयुक्त समय हुन्छ ।' उनले भने, 'गर्भवती हुनका लागी महिला शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ साथै पाठेघरमा भुण्र बस्दा हर्मोनल परिर्वतन धान्न सक्ने हर्मोनल लेबल हुनुपर्छ ।' 'गर्भावस्थालाई स्विकार गर्न सक्ने पाठेघर हुनुपर्छ ।' 'शारीरिक बनावट र शक्ति पनि हुनुपर्छ ।'
उनका अनुसार, 'एक सफल गर्भावस्थाका लागी थुप्रै विषयहरु मिलेको हुनुपर्छ त्यसैले २० बर्ष पछि मात्र गर्भधारण गर्नु राम्रो मानिन्छ ।' '२० बर्ष नाघेका महिलाको दिमाग, पाठेघर र अण्डा बिचको सन्तुलन राम्रो भएको हुन्छ जसका कारण स्वास्थ्य अण्डकोष निस्कने सम्भावना धेरै हुन्छ ।' 'स्वास्थ्य अण्डकोष भएको समयमा स्वस्थ्य शिशुको जन्मने सम्भाबना अधिक हुन्छ ।'
२० बर्ष काटेकी महिलाले गर्भधारण गर्दा मानसिक सन्तुलन, शरीरको पुर्ण विकास हुनुका साथै शिक्षित हुने भएकाले सामान्य प्रसुति हुने सम्भाबना बढि रहेको उनले बताए। उनका अनुसार, '२० वर्षपछि महिलाले गर्भधारण गर्दा शरीरमा आउँने परिर्वतनलाई धान्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुन्छ ।' 'त्यस्तै २५ बर्ष पुगेपछि बच्चा जन्माउदा असामान्य हुने सम्भावना पनि ५ प्रतिशतले बढ्दै जान्छ ।'
उनि भन्छन्, 'गर्भधारण गर्नु अघि बिशेषज्ञ कहाँ गएर आफ्नो शरीरमा कुनै समस्या भए नभएको थाहा पाएर गर्भधारण गर्दा अझै राम्रो मानिन्छ ।' 'नेपालमा अझै पनि गर्भाधारण गर्नु अघि स्वास्थ्य परिक्षण गराउने वा बिशेषज्ञकोमा सल्लाह लिने गरेको पाइदैन तर विकसित मुलकहरुमा धेरै पहिलेबाट नै गर्भधारण गर्नु अघि नै परिक्षण गराउने गरेको पाइन्छ ।' 'गर्भधारण गर्नु अघि बिशेषज्ञको सल्लाह लिएमा स्वस्थ्य शिशु जन्मनुका साथै आमाको स्वास्थ्यमा पनि कुनै खतरा हुदैँन ।'
गर्भधारण गर्नु अघि मुटु थाइरोइड, कलेजो र फोक्सोमा कुने समस्या छ छैन परिक्षण गराउनु पर्छ साथै रगत परिक्षण गर्दा एनिमिया अर्थात रक्तअल्पता र आइरनको कमी भएको छ या छैन त्यो सबै हेरेर गर्भवती भएमा कुनै समस्याको सामना गर्नु नपर्ने डा. प्रधानले बताए ।
उनका अनुसार, 'हाम्रो समाजमा अझै पनि किशोरावस्थामा गर्भवती हुनेको संख्या धेरै रहेको पाइन्छ ।' 'शिक्षाको कमि भएको समाजमा चाडो विवाह गर्ने गर्दछन् ।' 'सानो उमेरमा विवाह गर्दा उनिहरुलाई यौन सम्बन्धि ज्ञान हुदैँन साथै उनिहरु परिवार योजना बारे पनि जानकार हुदैैन्न ।' 'त्यसैले सानै उमेरमा आमा बन्नेको संख्या धेरै रहेको छ । परिमाण स्वरुप भविष्यमा उनिहरुको पाठेघरमा विभिन्न खाले समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् ।'